Wadne laga xaday boqorad Faransiiska ah oo la heley – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaWadne laga xaday boqorad Faransiiska ah oo la heley
Hiiraan Xog, Apr 24, 2018:- Booliiska dalka Faransiiska ayaa sheegay in ay dib u heleen sanduuq yar oo dahab ah oo la sheegay in lagu kaydiyay xubinta jirka ee wadnaha oo ay lahayd boqorad Faransiis ah oo noolayd qarnigii 16-aad.
Boqoradan ayaa lagu magacaabayay Anne, waxaana sheygaan qaaliga ah laga xaday madxaf ku yaala dalka Farasiiska.
Booliiska ayaa qabtay labo nin oo la tuhunsanaa, kadibna waxa ay u horseedeen bakaar weyn oo ay alaabta ku keydiyeen, halkaas oo ku taala magaalada Saint Nazaire.
Waxa lagu sheegaa in ay ahayd boqoradii ugu taajirsanayd dalka Faransiiska, waxayna mar is mehersadeen amiirka Ingiriiska Edward.
Balse ma aysan is calfan kadib markii amiirka la waayay isaga iyo walaalkiis Richard, taas oo markii dambe aad loogu eedeeyey in uu ka dambeeyay Boqor Richard III oo markaas talinayay.
Waxayna boqorada guursatay labo qof oo ka tirsanaa boqortooyada Faransiiska xiliyo kala duwan.
Sanduuqa dahabka ah ee la xaday ayaa waxa uu dhanyahay 500 garaam, wuxuuna u samaysanyahay sidii wadnaha oo kale.
Saraakiisha dowladda ayaa mar sii horeysay baaq u diray tuugada alaabta xaday, waxayna sheegeen in ay soo celiyaan alaabta, iyaga oo sheegay in laga yaabo in aysan fahamsanayn qiimaha taariikheed ee ay alaabtaas lahayd.